धेरै दुब्लो भएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? दूध र छोकडा खानुस्, अन्य ९ फाइदा | Ratopati
छोकडामा फाइबर, भिटामिन बी६, आइरन र कार्बोहाइड्रेट जस्ता पोषक तत्वहरु पाइन्छन् । छोकडा शरीरका लािग कुनै पनि औषधिभन्दा कम छैन । दिनमा ५ वटा छोकडा खाँदा शरीरलाई निकै फाइदा पुग्छ । तर त्यो भन्दा बढी छोकडा खानु नोक्सानदायक पनि हुनसक्छ ।
छोकडा र दूध
एक गिलास दूधमा ३ वटा छोकडा हालेर पकाउने । पकाउँदा दूध उम्लिएपछि ५ मिनेटसम्म सानो ग्यासमा पकाउने र त्यसलाई मनतातो हुँदासम्म राख्ने र छोकडा र दूध पिउने ।
यसका फाइदा :
ओछ्यानमा पिसाब गर्ने बालबालिकाका लागि
यदि बच्चाहरुमा ओछ्यानमा पिसाब गर्ने समस्या छ भने त्यस्ता बच्चाहरुलाई हरेक दिन छोकडा हालेको दूध दिनुपर्छ । तर १० वर्ष सम्मका बच्चाको दूधमा २ वा तीनवटा भन्दा बढी छोकडा हाल्नुहुँदेन ।
दुब्लोपनका कारण पीडामा भएकाहरु महिलाले ३ र पुरुषले ४ वटा छोकडा हालेर दूध पिउने गर्नुपर्छ । यसले तौल बढ्नुका साथै शरीरलाई आवश्यक पर्ने प्रोटिन र पोषक तत्व प्रदान गर्छ । साथै, यसले रोगप्रतिरोधी क्षमताको पनि बिकास गर्छ ।
मधुमेहका रोगीले १ देखि ३ वटा छोकडा खान सक्छन् । यसले रगतमा चिनीको मात्रा सन्तुलनमा राख्छ । र मधुमेहका बिरामीले बिना चिनी दूधमा छोकडा हालेर पकाएर खान सक्छन् ।
मुटु स्वस्थ राख्न
हरेक दिन छोकडा हालेको दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल सन्तुलन रहने र रक्तनलीहरु बिग्रिने, क्यान्सर र मुटुसम्बन्धी समस्याहरुको खतरा पनि कम हुन्छ ।
छोकडा र दूधले शरीरमा ग्लुकोज, प्रोटिन, फ्रक्टोज, फाइबर, आइरन र म्याग्नेशियम जस्ता तत्वहरुको आपूर्ति गर्ने भएकाले शरीरलाई शक्ति प्राप्त हुने गर्छ ।
जसको पाचन प्रक्रियामा गडबढी छ त्यस्ता व्यक्तिले छोकडा र दूध खाने गर्नुपर्छ । यसले कब्जियत, एसिडिटी जस्ता समस्यालाई कम गर्छ ।
यसले चिसो लाग्नबाट पनि बचाउँछ । जसको लागि एक गिलास दूधमा २ वा ४ वटा छोकडा हाल्ने, मरिच, अलैँची हालेर उमाल्ने र पिउने गर्दा चिसोबाछ बच्न सकिन्छ ।
दूध र छोकडा खाने गर्दा शरीरमा आइरन भरपुर प्राप्त हुन्छ । जसले रगत सफा गर्ने, रक्तसञ्चार तन्दुरुस्त बनाउने र छालालाई चम्किलो बनाउने गर्छ ।
दूध र छोकडामा भिटामिन बी६ हुने भएकाले यसले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्ने र दिमाग तेजिलो बनाउने काम गर्छ ।
#milk and datepalm
असाध्यै दुख्छ दाँत ? यी ८ प्राकृतिक तरिकाले दिनेछ आराम
पत्थरी हटाउन करेलाको रस
बिहान कफि पिउँदा हुने आश्चर्य लाग्दा फाइदाहरु
मृगौलालाई स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी गर्नुहोस् प्राकृतिक तरिकाले हेरविचार
प्रदेश प्रमुख राजेश झाको क्रियाकलापप्रति राज्यमन्त्री यादवको आपत्ति
थप ११२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि